लिँदालिँदै डीएसपी झिरिप्पै – TajaNepal
Home /Blog/लिँदालिँदै डीएसपी झिरिप्पै
काठमाडौँ । प्रहरी परिसर काठमाडौँमा मात्र होइन, प्रधान कार्यालयले समेत गराउँदा अटेर गर्ने बौद्धका प्रहरी डीएसपी श्यामकुमार राई १ लाख ४८ हजार घूस लिँदालिँदै कार्यालयबाट पक्राउ परी गृहसचिव प्रेमकुमार राईको प्रतिष्ठा बचाइदिएका छन् । जहाँ गयो त्यहाँ फोहोर गर्ने भनेर सङ्गठनभित्र परिचित यी राईको बारेमा पत्रपत्रिका रङ्गिएको धेरै भएको छैन । गृहसचिव राई र गृहमन्त्री बादलको जनजातिमोह यहाँ झल्किएको छ । चाडपर्वका बेला प्रहरीले सुरक्षा सतर्कतामा जोड दिन थालेको बेला परिसरले वृत्त र प्रभागहरूलाई समेत सचेत गराएको छ । नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमाथि कञ्चनपुर काण्डको अपजस थुपारिएको बेला राजधानीका संवेदनशील क्षेत्रको जिम्मेवारी लिएका प्रहरी अधिकृतहरूको चालचलन सङ्गठनकै बद्नाम गराउने खालको छ । बौद्धकै कार्यक्षेत्रको मनोहरा, कागेश्वरी नपा वडा नं. ७ मूलपानीमा जुवा अखडामा प्रहरी परिसर काठमाडौँले छापा मार्दा २४ जुवाडे र रू. ४ लाख ५८ हजार रकम प्रहरीले पक्रेको छ । गृहसचिव राईसम्म रमेश राईको पौरखी व्यवहार नपुगेको होइन । प्रहरीमा राजनीतिक आड पाएकाहरू चेन अफ कमान्डको ख्याल गर्दैनन् भन्ने कुरा रमेश प्रमाण हुन् । मेट्रो प्रमुख डीआईजी मनोज न्यौपाने परिसर प्रमुख वसन्त लामासमक्ष बौद्धका डीएसपी राईको खञ्चुवा शैलीको सूचना नपुगेको होइन । तर गृहसचिव राईले जोगाएका हुन् । उनीमाथि प्रहरीबाट कुनै कारबाही पनि हुँदैन । अख्तियारमा आफैँ बसेर आएकाले गृहसचिव राईले कारबाही गराउन दिने छैनन् । सेवाग्राहीसँग कार्यकक्षमै रातको समयमा घूस लिँदालिँदै पक्राउ परेका डीएसपी राईमाथि कस्तो कारबाही होला ? धेरैले शङ्का गरेका छन् । उनको घूस मुद्दा कमजोर बनाइने आँकलन बौद्धबासीको छ ।
बौद्धमा तिब्बती शरणार्थीहरूको तस्करी धन्दा चर्को छ । स्वयम्भू पनि यस्तै धन्दामा लोकप्रिय स्थान हो । गौशाला, बानेश्वर, अनामनगर, जनसेवा, कालिमाटी, महाराजगन्ज, सोह्रखुट्टे, दरबारमार्ग, बालाजु, स्वयम्भू जस्ता स्थानमा खटेका प्रहरी अधिकृतहरूले नै हो मेट्रोको इज्जत बचाउने ।
११ एसएसपी सिफारिस
प्रहरी एसएसपीबाट डीआईजी बढुवा हुन एकविरुद्ध अर्कोले मोर्चा बनाउने प्रहरी अधिकृतहरू यस पटक छक्क परे । घुस्याहाकै परिचय बनाएर सत्ता र शक्तिको आड लिन सिपालु रवीन्द्र धानुकको दौडधूप उनको व्याचलाई काम लागेन । धीरजप्रताप सिंह, वसन्त लामासमेत यो टिममा थिए । ललितपुरमा धानुकले राम्रै गरेका बताउनेहरू पनि थिए । उनलाई नेकपाका नेता जनार्दन शर्माले साथ दिएको बताइन्थ्यो । ट्राफिक महाशाखाका वसन्त पन्त र लागूऔषध व्यूरोका विश्व पोखरेलसम्मको नाम डीआईजी बढुवामा थियो । तर सिफारिस समितिले विनोद घिमिरे, विकास श्रेष्ठ, ठाकुर ज्ञवाली, पूर्णचन्द्र जोशी, तारणी लम्साल, शैलेश थापा, हरि पाल, नीरज शाही, प्रद्युम्न कार्की, हरिभक्त प्रजापति, सूर्य उपाध्यायको सिफारिस गर्दा मोर्चा बनाएका धानुक, सिंह र लामाहरू नै छुटेका छन् । यता, प्रहरीले रसुवा भन्सार हुँदै छिरेको सुन समाउन छाडेको छैन । टोखाबाट गत सात ५ किलो सुन समाएको छ । कहिले नागढुङ्गा, कहिले बालाजु, कहिले टोखा जस्ता स्थानबाट भरिया पक्राउ परेका छन् । मालिक पक्राउ नपर्ने भरिया मात्र पक्रिने परम्पराले पनि राजस्व छलेर बहुमूल्य धातु आयात निर्यात हुने चलन बनेको छ ।